I-VARALAKSHMI PUJA 2019: 9 IZITAYILE ZE-SAREE-DRAPING ONOKUTHI UTHATHE I-CUE KUYO-PAMPEREDPEOPLENY.COM - IFASHONI
I-Varalakshmi Puja 2019: 9 Izitayile ze-Saree-Draping onokuthi uthathe i-Cue kuyo
Ekhaya Ifashoni Imikhwa Iifashoni zentsingiselo Kaustubha Sharma Ngu UKaustubha Sharma | Nge-8 ka-Agasti ka-2019
IVara Mahalakshmi ibaluleke kakhulu kwinxalenye esemazantsi eIndiya. Iyafana neNorth Indian Dusshera. Kulo nyaka, kwi-2019, iwela nge-9 Agasti, ngolwesiHlanu kwaye iya kubhiyozelwa ngenzondelelo nangomdla. Ikwaqwalaselwa njengombhiyozo wabasetyhini kuba amasiko abandakanya ukunqula uthixokazi uLakshmi.
Abafazi bavathiswa ngeli thuba benxibe iimpahla ezintle nezintle zemveli, ngakumbi isaress. Ngelixa uzilungiselela umthendeleko namhlanje, zimbalwa iindlela zokwenza i-saree onokuzama ngazo-
Kulesi siqwenga, sidwelise izitayile ezili-9 ze-saree-draping onokuthi uzame kwiVara Mahalakshmi puja-
1. Ukucenga ixesha elide ngaphambili: Yiya kwisaradi yegolide eqinileyo. Iqhinga kukuba, wenza izibongozo ezibushelelezi endaweni yokubanzi. Ungagcina ubude bePallu bude buye emadolweni njengale iboniswe ngezantsi. Okanye, unokuyigcina isinqeni sakho, njengayo yonke ipallus eqhelekileyo.
uyisebenzisa njani ilamuni yeenwele
Mbini. Uhlobo lweQuirky lwaseIndiya : Ukuba uya kwesi sitayile sokudweba qiniseka ukuba ukhethe i-Sanjivaram silk saree. Zama i-saree epinki negolide yesilika. Yijikeleze njengesaree yesiqhelo ngokubongoza okubanzi kwaye ungeze ibhanti lesinqe. Ukuyigcina i-chic, qiniseka ukuba ukhetha ikhonkco lesinqe elilula.
3. Ukuncokola okuqhelekileyo: Jonga ngokuzikhethela ukhetha olu hlobo. Into ekufuneka uyenzile kukukwenza ukungcungcutheka kunye nokuyikhonkotha egxalabeni okanye ungayiphila ngoluhlobo. Ungazama oku kujongwa ngokungafanelekanga komnyhadala nawo.
Zine. Ukongeza iKamarbandh kwisinxibo sakho: Ukongeza i-kamarbandh kwisinxibo sakho kuya kutshintsha ukujonga okupheleleyo. Ungalandela isitayile sendabuko kwimeko yokwehla kwesafree.
5. Uhlobo lweLehenga: Kule nto, kuyakufuneka ukhethe i-Sanjivaram silk saree, ukuba awunayo i-lehenga okanye i-ghagra choli. Nxiba isarayi ngohlobo lwesiGujarati kodwa wenze izibongozo ezibanzi ezinqeni nasemagxeni akho. Banakho ukunxiba isiqwenga somfazi esine-neck blouse ukongeza ubunzulu kwinkangeleko.
6. Vula isitayile sePallu: Le yeyona ndlela iqhelekileyo kwaye isebenza ngalo lonke ixesha, ukuba uphelelwa lixesha. Unokukhetha isarike yomqhaphu wesilika okanye nayiphi na iseyile ngalo mbandela. Ikwabizwa ngokuba yi-freestyle pallu.
7. Isitayile seSleek Pleat: Endaweni yokuya kwizibongozo eziqhelekileyo, yiya kolu hlobo lokuncenga. Songa ipallu ngokufanelekileyo kwaye uyicofe. Isarha iyalawuleka ngale ndlela.
8. Uhlobo olusebenzayo lwePleat: Spice ukujonga kwakho ngale ndlela. Icebo kukuyivumela ngokukhululekileyo isafree kwaye uyicofe ukuze ujongeke ngokungaqhelekanga. Izibongozo zakho kufuneka zibanzile oku.
9. Uhlobo lwesiGujarati: Ukuba uyadika ngohlobo oluqhelekileyo, zama oku. I-pallu ebanzi yeGujarati ijongeka intle kwii-saree zesilika kwaye ungayifaka kwi-saree ngokukhawuleza.
Ke, yeyiphi indlela oyithandayo?
indlela yokulunga ngosuku olunye
wazi njani ukuba luthando lwenene
Ungayakha njani imisipha kubafana ababhityileyo
ukufaka curd ebusweni amaqhakuva
Isisu siphume ngexesha lokukhulelwa
Indlela yokwenza i-hairstyle ye-bun